Dab balaaran oo dhaliyay khasaare dhaqaale oo ka kacay gudaha suuqa Bakaaraha ee Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDab balaaran oo dhaliyay khasaare dhaqaale oo ka kacay gudaha suuqa Bakaaraha ee Muqdisho
Dab balaaran oo dhaliyay khasaare dhaqaale oo ka kacay gudaha suuqa Bakaaraha ee Muqdisho. [Xigasho Sawirka: Radio Shabeelle]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dab balaaran ayaa maanta oo Sabti ah qabsaday suuqa weyn ee Bakaaraha oo kuyaala magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, sida ay sheegeen goobjoogayaasha iyo ciidamada booliiska.
Dabka oo ka kacay korontada maqaaxi kutaala suuqa ayaa si dhaqso ah ugu fiday qeybo badan oo kuyaala Suuqa Bakaaraha, sida ay sheegeen goobjoogayaashu.
Dabka ayaa baaba’shay meherado ganacsi oo badan oo kuyaala gudaha suuqa.
Ma jirto wax dad ah oo khasaare nafeed kasoo gaartay dabkaas, sida ay sheegeen saraakiisha booliiska.
Gaadiidka dab damiska ayaa ku guuleystay in ay seexiyaan dabkaas balaaran oo ay ka dhasheen khasaare dhaqaale.
August 26, 2017 Mareykanka oo sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan khasaare dad shacab ah kasoo gaaray weerar ka dhacay deegaanka Bariire